Akụkọ - Ụlọ ọrụ Weibo na-ejide ọgbakọ ọrụ 2021
Companylọ ọrụ Weibo na-ejide ọgbakọ ọrụ 2021
N'ụtụtụ nke Machị 1st, ụlọ ọrụ ahụ haziri nzukọ ọrụ 2021 na ọnụ ụlọ ọgbakọ C3. Nzukọ a bụ onye osote onye isi njikwa Liu Wei, na Xue Gangyi, onye isi na onye isi nke Weibo, na onye isi njikwa Li Dong, Vice General Managers Qi Jifei, Niu Deqing, na Chief Financial Officer Liu Runhong gara nzukọ ahụ.
Onye isi njikwa Li Dong nyere akụkọ akụkọ ọrụ na ogbako ahụ nke isiokwu ya bụ "Ịkwado ntọala ntọala, Imewanye Ogo na Ịkwalite Business Main, Ịgbalị ịmalite njem ọhụrụ nke Weibo's "14th Year Five Year" Development; Onye isi njikwa Li Dong rụtụrụ aka mgbe ọ na-enyocha ọrụ ya na 2020, n'okpuru nduzi siri ike nke kọmitii otu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ akpaaka, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso nduzi nke otu ahụ ma mejuputa mkpebi siri ike na mbugharị nke Kọmitii Central Party. . Iji nweta ọganihu dị elu nke ụlọ ọrụ dị ka onye nduzi, lekwasị anya na ihe ngosi akụ na ụba kwa afọ na ọrụ ndị dị mkpa, jiri nwayọọ na ike na-azaghachi ihe isi ike na ihe ịma aka, na-ahazi mmepe azụmahịa nke ụlọ ọrụ na mgbochi na ịchịkwa ọrịa oyi oyi ọhụrụ nke okpueze, ma rụọ ọrụ siri ike nke ịzụ ahịa, nyocha na mmepe, mmepụta na njikwa, a rụpụtawo ihe ndị dị ịrịba ama n'inweta ọganihu na-aga n'ihu n'ịdị mma azụmahịa na mgbochi ọrịa na-efe efe na njikwa, na isi ebumnobi na ọrụ nke "nkwado" ogbo enwetawo nke ọma, na ọdịiche dị na "mmepe dị elu" ka agbakwunyere ọzọ.
Onye isi njikwa Li Dong tụpụtara ebumnuche 2021. O mekwara ka o doo anya na 2021 bụ afọ 100th nke ntọala Communist Party nke China na mmalite nke oge "atụmatụ afọ ise nke iri na anọ". Ụlọ ọrụ ahụ ga-emejuputa Kọmitii Central Party, ụlọ ọrụ otu, ụlọ ọrụ akpaaka, na ndị na-eketa ụlọ ọrụ n'okpuru nduzi nke Xi Jinping ọhụrụ oge nke socialism na àgwà Chinese. Mkpebi na ntinye nke nzukọ na ndị isi oche, na-agbaso "mmepe dị elu", mejuputa echiche ọrụ "mmeziwanye", ime mgbanwe dị omimi, na-ewusi ihe ọhụrụ ike, na ndabere na mmepe "mmepụta", iji welie ọnụ ọgụgụ ahụ. nke ụlọ ọrụ ndị dị ugbu a ma gbasaa ntụziaka nke ngwaahịa ọhụrụ dị ka mmalite. Gbasawanye azụmaahịa bụ isi nke sensọ ikewapụ ike, banye n'ọhịa ihe mmetụta ọhụrụ, wee mee ka mmezi nke nha na ngalaba njikwa ngwa ngwa.
2021 bụ afọ mbụ nke mgbanwe na nkwalite ụlọ ọrụ. Ọ bụ afọ mbụ nke "atụmatụ afọ ise nke iri na anọ". Ọrụ anyị adịlarị n'akwụkwọ. Weibo bụ azụmahịa anyị na ụlọ anyị. Anyị aghaghị ịkọrọ otu ọchịchọ ahụ. Na-arụkọ ọrụ ọnụ. "A ghaghị ime ihe ndị siri ike dị n'ụwa n'ụzọ dị mfe, na ihe ukwu ndị dị n'ụwa aghaghị ime nke ọma." Anyị aghaghị ịzaghachi oku ụlọ ọrụ na-akpọ "ịgbanwe ma melite arụmọrụ", banye n'egwuregwu ahụ nke ọma ma jiri obi ike buru ibu dị arọ. Bụrụ onwe gị ka mma, bụrụ Weibo ka mma!
Oge nzipu: Mar-05-2021
Ihe mmetụta voltaji ugbu a, Oriri ike dị ala Dc ihe mmetụta ugbu a, Mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a sensọ, Mmetụta Ụlọ Nzukọ Ac ihe mmetụta ugbu a, Ihe mmetụta dị ugbu a Ac dị elu, Ihe mmetụta Ụlọ Nzukọ ugbu a,